Soo dejisan Crystal Security 3.7.0.40 Standard... – Vessoft
WindowsAmnigaSawireyaasha fayraskaCrystal Security
Bogga rasmiga ah: Crystal Security
Crystal Security – nidaam weyn oo daruuri ah si loo ogaado oo looga saaro xaasidnimo ka computer aad waqti dhab ah. Software wuxuu isticmaalaa teknoolajiyada casriga si loo ogaado khatarta ku salaysan adeegga VirusTotal iyo nidaamkeeda u gaarka ah oo ururiya xogaha ka yimaada nidaamyo badan oo adduunka ah si loo ilaaliyo dayac-tirka eber-nimada iyo ka fogaadaan weerarada xun. Crystal Security waxay kuu ogolaaneysaa inaad si falanqeyn buuxda u falanqayso ama falanqeyn degdeg ah oo ku saabsan unugyada ugu nugul ee nidaamka iyo in la eego xaaladda falanqaynta shaki, shaki la isku halleyn karo ama aan la isku halleyn karin. Crystal Security waxaa ku jira dhowr qalab oo lagu rakibayo xallinta tooska ah ee dhibaatada la ogaaday iyada oo aan adeegsaneyn faragelinta iyo in la dejiyo shuruudaha uu barnaamijku u diri doono farriin khatar ah. Crystal Security waxay leedahay interface dhexdhexaad ah waana xal aad u fiican in la bixiyo heer dheeraad ah ee ilaalinta kombiyuutarka ee aan la dagaallamin antivirus buuxa oo buuxa.
Fiirinta viruska adigoo isticmaalaya farsamooyinka daruuriga ah
Qaababka kala duwan ee nidaamka sawirka
Doorashooyin dejin badan oo badan
Cusbooneysiin otomaatiik ah ama mid cusub
Soo dejisan Crystal Security
Faallo ku saabsan Crystal Security
Crystal Security Xirfadaha la xiriira